श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा हो’सै उ’ड्यो……! – List Khabar
Home / रोचक / श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा हो’सै उ’ड्यो……!
श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा हो’सै उ’ड्यो……!
admin November 19, 2021 रोचक Leaveacomment 76 Views
एजेन्सी। एक व्यक्ति मध्यरातमा एक घरमा छिरे । ती युवक ख’राब नियतसहित घरभित्र पसेका थिए । भित्र गएर हेर्दा महिला पतिसँग सुतिरहेकी थिइन् । यी युवकले महि’लासँग जानुभन्दा पहिले किचनमा गए ।
त्यहाँ दूध र मलाई थियो । उनले पहिले दूध र मलाई खाए । त्यस’पछि बल्ल उनी महिलाको नजिक गए । जहाँ महिला पतिसँग सुति’रहेकी थिइन् ।
सुतिरहेकी महिलालाई राती क’रिब ३ बजे आफ्नो खुट्टा कसैले चलाएजस्तो लाग्यो । उनलाई लाग्यो उनका पतिले उनको खुट्टा चलाउँदैछन् । महिला गहिरो निद्रामा थिइन् तर उ’नलाई थाहा भइसकेको थियो कि उनको खुट्टा कसैले चलाइरहेको छ ।
एक्कासी ती युवकले महिलाको शरीरभरी चलाउन लागे । महि’लाले त्यसपछि भने आँखा खोलिन् । आँखा खुल्नासाथ महिलाको होस उड्यो । किनकि महिलाले जसलाई आफ्नो पति सम्झेकी थि’इन् त्यो त अर्कै व्यक्ति थियो ।
आत्तिएर महिलाले जोडले चिच्याइन् । पत्नी चिच्या’एपछि पतिको पनि निद्रा खुल्यो । पतिले युवकलाई साम’त्न खोज्दा युवक भागे । तर भाग्दै गरेका युवकलाई अन्ततः पतिले समाते । उनले युवकलाई पुलिसमा बुझाइदिए । पुलिसले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाएको छ । एजेन्सी
याे पनि पढ्नु’हाेस
किन आउँछ स्ट्रेच मा’र्क ? हटाउने यस्ता छन् उपाय
बच्चा जन्माएपछि महिलाहरूलाई थपिने समस्यामध्ये ए’क हो, स्ट्रेच मार्क । यद्यपी गर्भावस्थाका महिलामा मात्रै नदेखिएर १५/१६ वर्षका किशोरीमा समेत स्ट्रेच मार्क देखिन्छ । स्ट्रेच मार्कका कारण महि’लाहरू क्रप टप वा साडी लगायत भनेजस्ताे लुगा लगाउन पाउँदैनन् । स्ट्रेच मार्क्सले विभिन्न प्रकारको कपडा लगाउने स्वतन्त्रता हटाउँछ ।
स्ट्रेच मार्क विभिन्न कारणले आउने गर्दछ । जस्तै बढ्दो’ उमेर, गर्भावस्था, मोटो’पना, कोर्टिसोन स्किन क्रीमको अधिक प्रयोग यो स्टेरोइड क्रीमको एक प्रकार हो, जुन खुजली र सूजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यौवन, कोलेजेन को असामान्य उत्पादन आदी कारणले गर्दा हाम्रो शरिर’मा स्ट्रेच मार्क आउने गर्दछ । स्ट्रेच मार्क विशेष गरेर पेट, क’म्मर, फिला छाती लगायतको भागमा आउने गर्दछ ।
खास’गरी पेट, छाती, पाखुराको पछाडिपट्टि, खुट्टाको पछि’ल्लो भागमा राता र से’ता धर्साहरू अर्थात् स्ट्रेच मार्क देखिने गर्छ । स्ट्रेच मार्क जुन अङ्गमा मासु बढी लागेको हुन्छ अर्थात् जुन अङ्गमा मासु जम्मा हुन्छ त्यहाँ बढी देखिने गर्छ । शरीरको वृद्धि विकास अर्थात् मोटाउँदा छाला तत्कन्छ, त्यसपछि स्ट्रेच मार्क देखिन्छ ।
स्ट्रेच मार्क कस्तो अवस्थामा आउँछ ? –शरी’रको वृद्धि विकास अर्थात् उमेरभन्दा चाँडै मोटाउँदा स्ट्रेच मार्क आउँछ । –मोटाइसकेपछि चाँडै दुब्लाउँदा स्ट्रेच मार्क आउँछ । —गर्भावस्थामा स्ट्रेच मार्क आउँछ ।
Previous सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण लाग्दै आज, के गर्ने, के नगर्ने ? थाहा पाउनुहोस्
Next केहीबेर अघि काठमाडौंमा घटेको यो अत्यत दुखदायी घटना